အကြံပြုချက်များမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Wi-Fi အချက်ပြစွမ်းအားကိုစစ်ဆေးပါ။ သိကောင်းစရာများ
Dernière mise à jour le 25 octobre 2020 à 16:07 par brupala . Votre connexion Wi-Fi vous semble lente, les pages Web se chargent mal et les téléchargements sont interminables ? Le problème vient…
Adobe Flash Player ပendိပက္ခအဆုံးမှာမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။ - သိကောင်းစရာများ
pistouri အားဖြင့် 19:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 17, 50 တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်။ Adobe Flash Player Shockwave သည် ၂၀၂၀ တွင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ပလပ်အင်ကိုပုံမှန်ထိခိုက်သည် ...
Slots ရှိ Gamble Feature ကရှင်းပြသည် Gamble feature သည် slot games များတွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရှိခဲ့ပြီဖြစ်ရာ၎င်းတို့အားကစားသူများအတွက်ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးပိုမိုအကျိုးအမြတ်များစေမည့်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသော feature တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
Pale Moon ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲနည်း - သိကောင်းစရာများ
pistouri အားဖြင့် ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်၊ Pale Moon သည် Firefox မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး2သို့မဟုတ် 2020 Bits ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ Pale Moon Local Switcher ကို Install လုပ်ပါ။ လိပ်စာတန်းရှိအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။
Windows 10 Explorer တွင်မတွေ့ရသေးသောဓာတ်ပုံများ - အကြံပြုချက်များ
pistouri မှအောက်တိုဘာလ 2, 2020 ရက် 07:06 AM တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်။ Windows 10 Explorer တွင်မပြသောဓာတ်ပုံသမ်းနံ့များတစ်ခါတစ်ရံ၊ သမ်းနေး (thumbnails) ပေါ်လာမည်မဟုတ်။
"XPCOM ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ" မီးဖိုင်းစာ - သိကောင်းစရာများ
pistouri အားဖြင့် 1:2020 pm တွင်အောက်တိုဘာလ 21, 00 တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်။ "xpcom missing error" သည်အမြဲတမ်း Firefox ပရိုဂရမ်ဖိုင်တွဲများရှိပြwithနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့် ...
startup၊ task bar နှင့် Center option တွင်အရောင်များကိုပြသပါ။
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 10, 2020 0
pistouri မှအောက်တိုဘာ 2, 2020 ရက် 08:31 AM တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်။ Windows 1909 ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းသည်ပေါ့ပါးသည့်အခင်းအကျင်းသစ်နှင့်အတူ taskbar၊ start menu, center ကိုပြသထားသည့်အသစ်စက်စက်ဖြင့်လာသည်။
စာကြည့်တိုက်များသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါများကိုအခြား disk သို့သို့မဟုတ်အခန်းကန့်သို့ရွေ့ပြောင်းရာတွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်။ - …
pistouri မှအောက်တိုဘာလ 2, 2020 ရက် 08:35 တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ တေးဂီတနှင့်ဗီဒီယိုစာကြည့်တိုက်များကိုအခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရန်သင်အမှားလုပ်မိပါက ...
အမှား 0xA00F425C, 0xA00F424F, 0xA00F4243,0xA00F4246 ကင်မရာနှင့်ကင်မရာ - သိကောင်းစရာများ
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 8, 2020 0
pistouri အားဖြင့် ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်အမှားကုဒ်ကိုအောက်ပါ error message ဖြင့်ဖော်ပြသည် - "အခြား application များကိုပိတ်ပါ။ " နောက်တစ်ခု ...
123 ... 42 လာမယ့်